Ny Razana sa i Jesosy Kristy? - Dinika forum.serasera.org
Ny Razana sa i Jesosy Kristy?
Fitohizan'ny hafatra : Ny Razana sa i Jesosy Kristy?
maresaka.com - 16/04/2012 03:43
Miharena - 17/04/2012 05:49
Fanamarihana matetika ataon'ny Kristianina ity resaka razana ity fa mba mety azontsika atao ve ny manome vahaolana mahomby hahalalàn'ny Malagasy fa tokony hanaraka an'i Krsity izy?
Raha anontanianao manko ireo mpitana ny fomban-drazana dia manaraka an'i Mristy sy Maria koa izy ankoatry ny fanarahany ny razana.
Misy fahalalàna notazonina hatramin'ny farany ary ny nahatongavan'ny fivavahana Krsitianina dia tsy nanakana fa nanamafy ny finoana ananan'ny Malagasy momba ny fahaveloman'ny fanahy aorian'ny fahafatesana. Izany hoe ny fomba fteny dia hoe lasan-ko razana, na nodimandry fa tsy misy ny fahafatesana.
Ka raha milaza ohatra Mareaka.com ny momba ny teny hoe : "Nahoana ianareo no ato ami'ny maty no itadiavanareo ny velona" Dia midika fahazoan-kevitra mazava io ami'ny Malagasy ary tsy nanaitra azy satria tsy fahagagàna izany fa ny olombelona rehetra dia manana io toetra io avokoa; dia ny fahaveloman'ny fanahy izany, ka tsy ilay nofo no maha-olona fa ny fanahy. Ny an'i Jesosy moa dia tsy tao am-pasana intsony na ny nofony na ny fanahiny fa ny antsika olombelona dia mety miraraka ny nofo ary ireo izay tsy mety mandao ny nofony dia lasa lolovokatra. Izay tsy afaka mandao ny erana eto an-tany dia lasa matoatoa.
Dia eo no mipetraka ny fanontaniana: Raha mamaky Baiboly isika dia misy ao amin'y Ezekiela ny momba ny fitafy nofo indray ny taolana. Saingy raha tsy faminaniana faharoa nampanaovina an'i Ezkliela dia tsy nisy fanahy ireo taolana sy nofo ireo. Ny lesona azo avy amin'izany dia an'Andriamanitra ny fanahy ary miverina AMINY ary IZY ihany no manam-pahefana mamerina azy amin'ny nofo na tsia aorian'ny fahafatesan'ny nofo iray.
Dia io fahazoan-kevitra io no itombenan'ny finoana Malagasy rehetra na mbola tsy nisy Baiboly tonga aza teto.
Miharena - 17/04/2012 05:56
maresaka.com - 18/04/2012 02:29
Ka raha milaza ohatra Mareaka.com ny momba ny teny hoe : "Nahoana ianareo no ato ami'ny maty no itadiavanareo ny velona" Dia midika fahazoan-kevitra mazava io ami'ny Malagasy ary tsy nanaitra azy satria tsy fahagagàna izany fa ny olombelona rehetra dia manana io toetra io avokoa; dia ny fahaveloman'ny fanahy izany, ka tsy ilay nofo no maha-olona fa ny fanahy.
Irariako ho tsy fahalalana kanefa toy ny fanahy iniana ny andisoanao ny fahamarinana ry Miharena. Ny vatana, nofon'i Jesosy, no nitsangana niala tao am-pasana ka asa inona no mahatonga anao manao bodongerina toy izao?
Tsotra ny nambarako etsy ambony, ary tsy hevitro fa hevitra tao amin'ny Soratra Masina: Jesosy Kristy irery ihany no ahazoan'ny olona fiainana sy famonjena/famelan-keloka.
Miharena - 19/04/2012 05:23
asa inona no mahatonga anao manao bodongerina toy izao?
Tsy bodongerona ary miala tsiny raha tonga dia nanafintohina anao ilay valinteny.
Fa ny momba ny fahalalàn'ny' Malagasy dia mametraka hatrany an'Andriamanitra ho ambony noho ny razana izy hatrizay noho ny fahalalàny fa Kristy no manam-pahefana ambony raha vao niditra teto ny fivavahana Kristianina. Misy fampifandraisana fahazoana ny momba ny fiainana aorian'ny fahafatesana ihany no efa nisy teto amintsika fa tsy hoe vaovao loatra ny fiainana mandrakizay no tiana ambara eo ambony. Izany tsy midika fa fanaovana zinona an'Andriamanitra sy Kristy ny fanajana ny razana fa manome vaika bebe kokoa ny fanantenana fianana aorian'ny fahafatesana.
maresaka.com - 20/04/2012 01:50
niryna - 28/04/2012 23:16
Mbola maro ireo Malagasy no diso hevitra sy manantena fitahian'ny razana. Ankoatr'ireo mangata-pitahiana amin'ny razana dia misy koa ireo miseho mivantana miantso tromba sy fanahin'ny maty, izay heveriny fa afaka manampy azy satria tsy takatry ny sainy
Toy ny olona mirodorodo mangata-pitahiana amin'ny razana dia mihazakazaka mankany am-pasana koa ny mpanao ody sy mpamosavy; ary tsy zava-baovao amin'ny Malagasy intsony izany mpamosavy milalao faty izany. Tsy misy mijoro amin'ny herin'i Kristy izy ireny na dia iray aza. Fanahin'ny devoly no tompoin'izy ireny na voafitaka izy na tsia..
Ka satria mbola lavitra ilay fizarana ny tenin'Atra na mbola tsy mandray Azy izy ireo dia mbola ao anatin'ny maizina ka,raha mizara amin'izy ireny tsikelikely ny tontolo iainana dia hisy koa ny handray an'i kristy ary hiala amin'ny fahazaran-dratsiny.Mbola tsy tonga ny antsony fa dia anjaran'izay efa manana an'i kristy no mizara izany ho azy ireo fa rehefa ao anatin'ny aizina tokoa anie dia mangitsokitsoka tokoa ilay aizina e
misaotra anao mizara ary mbola anjarantsika ihany koa no mivavaka ireo izay mbola voagejan'i satana fa misy tsy mahafantatra izy ireny ary misy ny efa nahafantatra ka niverina ary lahoana tokoa vao afaka tao raha tsy misy mpanampy
kiriah - 29/04/2012 13:20
zaho mba gaga !!!!!!! , amiko dia fantany ihany ilay fahamarinana saingy tsy tiany ny manaiky hoe diso izy ,satria aminy ny fanekeny ny hevitry ny hafa dia toa milaza azy hoe : " tsy mahalala ninoninona " , noho izany dia tsy vonona ny hanaiky ampahabemaso izy hoe : MARINA IZANY .
manoasoa - 05/10/2012 12:01
ITimoty 2/5 Fa iray no Andriamanitra, ary iray no Mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy, Izay olona.